ktmkhabar.com - कर्मचारी हुन त यस्ता, जो नियमित साइकल चढेर कार्यालय आउँछन् !
कर्मचारी हुन त यस्ता, जो नियमित साइकल चढेर कार्यालय आउँछन् !
विराटनगर । प्रदेश १ को सडक विकास पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका शहरी विकास तथा भवन महाशाखाका प्रमुख मिलन अर्चायले गाडीको सुविधालाई अस्विकार गरी ईलेक्ट्रिल साईकल लिएका छन्। दिनानुदिन बढदै गएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धीले सरकारप्रति सर्वसधारणको आक्रोश बढिरहेका बेला महाशाखा प्रमुख अचार्यले ईन्धन जोगाउन र वायु प्रदर्शन रोक्न आफूले मन्त्रालयबाट ईलेक्ट्रिल साईकल लिएका हुन।
विस २०५४ सालबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनले वायु र ध्वनी प्रदर्शन कम हुनुको साथै ईलेक्ट्रिल साईकल चढ्दा पेट्रोलको खपतमा समेत टेवा पुग्ने बताउँछन्। यसअघि सरकारले सातामा दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। तर सर्वत्र आलोचना हुनुको साथै प्रभावकारी नभएपछि दुई दिने बिदाको निर्णय फिर्ता लिएको छ। महाशाखा प्रमुखले ईन्धन संकट आएको बेला आफूबाट नै अतिआवश्यक बाहेकको सुविधालाई त्याग गरेर आफ्नो दायित्व निर्भाह गर्नु पर्ने बताउँछन्।